‘अस्पताल शील गरेर कोरोना संक्रमण रोकिएला ?’ – Makalukhabar.com
२०७७ श्रावण २०, मंगलवार २३:३५
‘अस्पताल शील गरेर कोरोना संक्रमण रोकिएला ?’
मकालु खबर	 Aug 2, 2020 मा प्रकाशित 0
विराटनगर । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले विश्व नै आक्रान्त भएको अवस्थामा नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन । पछिल्लो समय कोरोना भाईरस संक्रमितको संख्या नेपालमा तिव्ररुपमा बढिरहेको अवस्थामा सबैभन्दा बढि स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित छ । प्रदेश १ त्यसमा पनि विराटनगर भाइरस संक्रमणका लागि संवेदनशील क्षेत्र हो जहाँका केही स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्यरत चिकित्सक तथा कर्मचारीमा पनि संक्रमण देखिएको छ ।
यस्तैमा विराट अस्पताल (बिराट नर्सिङ होम) का सञ्चालक एव वरिष्ठ चिकित्सक तथा त्यहाँ पार्टटाइममा कार्यरत नर्सहरुलाई कोरोना पुष्टि भएसँगै एक हप्तादेखि अस्पताल शील गरियो । त्यस्तै कोशी अस्पताल विराटनगरका पोस्टनेटल वार्डमा कार्यरत नर्समा कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएपछि उक्त अस्पतालको पोस्टनेटल वार्डपनि शील गरियो ।
कोरोना भाइरससँगको लडाईमा स्वास्थ्यकर्मीहरु अग्रभागमा रहेर काम गरीरहेको अवस्थामा अस्पतालका कर्मचारीलाई कोरोना पोजेटिभ देखिने वित्तिकै अस्पताल नै शील गर्दा अन्य विरामीहरुको स्वास्थ्य सेवामा प्रत्यक्ष असर गरेको भएपनि राज्यले त्यसलाई गम्भिरतापूर्वक नलिएको देखिन्छ ।
बिराट नर्सिङ होम एक साता यता शील छ । दैनिक सयौं विरामी उपचारको लागि आउने स्वास्थ्य संस्था लगातार बन्द रहँदा गम्भिर तथा दिर्घ रोगीहरुलाई सकस परेको छ । यसका अलावा स्वास्थ्य विमा सेवा लिएका र नियमित आउने विरामीहरुलाई स्वास्थ्य जोखिम बढेको छ । ‘एकाध चिकित्सक, कर्मचारीलाई पोजेटिभ देखियो भन्दैमा अस्पताल नै बन्द गर्नु गलत हो ।’ विराट मेडिकल कलेजका प्रशासन प्रमुख सुधीर सिंह राठौर भन्छन्–‘स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्दा कोरोनाभन्दा बढि जोखिम भएकाहरुले स्वास्थ्योपचारबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आयो ।’
कोराना भाइरस संक्रमणबाट बच्न संक्रमित देखिएको अस्पताल शील गर्नुभन्दा पनि सचेतना अपनाउनु श्रेयकर छ । राठौरकै भनाईमा अस्पताल नै शील गर्नुभन्दा संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राखेर अस्पताललाई संक्रमणरहित गराएर सुरक्षाका प्रबन्धसहित स्वास्थ्य सेवा सूचारु गर्नु हितकर हुन्छ । ‘अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई शील गर्नुभन्दा एक पटक सोच्नुपर्दथ्यो । यसले त अन्य विरामीहरुको अधिकार हनन गर्यो नी ।’ उनी भन्छन्–‘हामीसँग अन्य रोगका बिरामीहरु छन्, नियमित अस्पताल आइरहने विरामीहरु कोरोना संक्रमणको भन्दा बढी जोखिममा परे । अस्पताल शील गरेर स्वास्थ्यकर्मी साथै आम जनताको मनोबल घटाउने काम गर्नु उचित होईन ।’
अस्पतालका पल्मोनोलजी, क्रिटिकल केयर एण्ड स्लीप मेडिसिन डा. पुरु कोईरालाले पछिल्लो समय विराट नर्सिङ होम शील गर्नु अगाडी उपचारका लागि आएका कुनैपनि बिरामीले ‘अस्पतालले हेरेन’ भन्ने गुनासो नगरेको अवस्थामा एक्कासी अस्पताल शील गर्दा अन्य प्रकारका विरामीहरुलाई गम्भिर असर परेको बताए ।
डा. पुरु कोईराला
‘कोरोना संक्रमण शुरु भएदेखि कुनै विरामीलाई उपचार नगरी फर्काएका छैनौं । तर, अस्पतालमा एकाध कोरोना संक्रमित देखिने वित्तिकै सरकारले शील गरेर चैं नागरिक अधिकार हनन गर्यो ।’ डा. कोइरालाको भनाईमा सरकारले संक्रमण भएको क्षेत्रलाई शील गरेर अन्य बाँकी रहेका अस्पतालको भागलाई स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर खुल्ला गर्दिनुपर्दथ्यो । ‘अस्पताल नै शील गरेर सञ्चारमाध्यममा ठूल्ठूला हेडलाइनमा आएका समाचारले डाक्टरहरु नै सुरक्षित रहेछन् हामी सामान्य मान्छे कसरी सुरक्षित रहेछौं र भन्ने भय उत्पन्न भयो ।’
सरकारले निजी अस्पताललाई कोरोना भाइरस परीक्षण गराउने अनुमति नदिएको कारण पनि जोखिम बढेको उनको तर्क छ । यदि क्षमता भएका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई कोरोना परीक्षण गर्न दिने होभने संक्रमण दर घट्दै जाने डा. कोइरालाको तर्क छ । साथै निजी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरुलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार कोभिडको उपचार गर्ने तालिम प्रदान गर्नुपर्ने डा. कोइरालाको भनाई छ ।
बिराट अस्पतालले गए राती सवारी दुर्घटना भएका बिरामीलाई तत्काल उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आएकोले इमरजेन्सीमै सुरक्षाका सबै उपाय अपनाएर तीन जना बिरामीलाई उपचार गर्यो । ‘यदि अस्पताल बन्द भएको थियो भने उनीहरुको उपचार नपाई मृत्यु हुने सम्भावना थियो । सरकारले अस्पतालहरुमा कोरोना संक्रमित देखिनै वित्तिकै अस्पताल नै शील गर्नुपर्छ भन्ने रणनीति बदल्नुपर्छ ।’ उनको भनाई छ ।
विराट नर्सिङ होम एउटा अपवाद मात्र हो । यदी अन्य अस्पतालहरु पनि एकाध दुई कोरोना संक्रमित देखिने वित्तिकै शील गर्ने हो भने भोली देशका कुनैपनि अस्पताल कोरोना संक्रमणबाट अछुतो नरहन सक्छन् । के त्यसो भए सबै अस्पतालहरुलाई बन्द गरीदिने त ?
वरिष्ठ जनस्वास्थ्य विद् डा. रवीन्द्र पाण्डे
‘अस्पताल शील गर्नुभनेको अरु विरामीलाई मृत्युको मुखमा राख्नु हो । संक्रमण देखिएकालाई आइसोलेसनमा राखेर, कर्मचारी, चिकित्सकको स्वाब टेस्ट गरेर सुरक्षाका उपाय अपनाएर अस्पताल खोल्नुपर्छ ।’ वरिष्ठ जनस्वास्थ्य विद् डा. रवीन्द्र पाण्डेको धारणा छ । ‘हामीसँग यसै त स्वास्थ्य संस्थाहरुको कमी छ । अस्पतालमा चिकित्सक कर्मचारीलाई कोरोना भयो भन्दैमा भोली सबै अस्पताल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयोभने अरु विरामीलाई के गर्ने ?’ डा.पाण्डेको उत्तर–‘बरु ठूला मेडिकल कलेज र अस्पतालहरुलाई कोभिड अस्पतालमा परिणत गर्ने र संक्रमितहरुलाई उपचार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । एक जनालाई पोजेटिभ देखिए उसँग सम्पर्कमा आएका सबैलाई ट्रेस गर्ने, चिकित्सकहरुलाई पालैपालो काममा लगाउने, पालैपालो क्वारेन्टाइनमा राख्ने ब्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
गत चैत्र ११ गते देखि लकडाउन कार्यन्वयन गरेसँगै विराट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालले अस्पतालमा आएका बिरामीहरुलाई उच्च सर्तकताका साथ सेवा दिँदै आईरहेको प्रशासन प्रमुख सुधीर सिंह राठौरले बताए ।
उनका अनुसार अस्पताल हाताभित्र प्रवेश गर्ने बिरामी तथा बिरामी कुरुवाहरुलाई प्रवेशद्धारमा नै साबुन पानीले हात धुन लगाई, ज्वरो नाप्ने, उनीहरुको विवरणहरु संकलन गर्ने गरीएको छ । अस्पतालमा आएका बिरामीलाई कोरोनाको लक्षण देखिएमा तत्काल पिसिआर जाँच गराउन पठाएर उपचार गरिने ब्यवस्था छ ।
सुधीर सिंह राठौर
कतिपय अवस्थामा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण बढेसँगै बिरामीले आफ्नो लक्षणहरु पनि ढाँट्ने गरेको उनले गुनासो गरे । ‘कतिपय विरामीले ट्राभल हिष्ट्री ढाँट्ने, लक्षणहरु पुरा नबताउँदा संक्रमणको जोखिम बढेको हो । यसले विरामीलाई त खतरा हुन्छ नै साथमा अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, कर्मचारी र अन्य विरामी पनि जोखिममा पर्छन् । त्यसकारण कुनैपनि विरामीले आफ्नो रोग र ट्राभल हिष्ट्री ढाँट्नु हुँदैन ।’ राठौर भन्छन् ।
विराट अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा लिन आउने सबै सेवाग्राहीहरुका लागि कोरोना सम्बन्धि जनचेतना प्रशिक्षण दिन टिम नै तयार पारेको छ । उक्त टीमले कोरोना सम्बन्धि प्रशिक्षण दिने गरेको छ । हालको समस्या सबैको साझा समस्या भएकाले निजी अस्पताललाई सुरक्षित र व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न सरकारले दिशानिर्देश गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
कोरोना भाइरस भनेको भाइरल ईन्फेक्सन रहेको बिराट मेडिकल कलेजका प्यालोजिष्ट एण्ड ल्याव कोडिनेटर डा. सन्तोष उपाध्याय काफ्ले बताउँछन् । इतिहासलाई हेर्दा कोरोना भन्दा सुक्ष्म र शक्तिशाली भाईरसहरु महामारीको रुपमा आएका थिए । तिनलाई एकै पटक मार्न र निर्मुल गर्न सकिएको थिएन । विज्ञानको खोज र अनुसन्धानले नै भ्याक्सिनहरु पत्ता लागेका हुन् ।
डा. सन्तोष उपाध्याय काफ्ले
‘विगतमा कोरोना भन्दा शक्तिशाली भाइरलहरु आए तिनीहरुलाई पनि शुरुमै निर्मुल गर्न सकिएको थिएन । तर, विज्ञानको खोज र अनुसन्धानले नै भ्याक्सिन पत्ता लागेको हो । हामीले पनि कोरोना सँग लड्न त्यहि प्रक्रियालाई अपनाउनु पर्छ ।’ डा. काफ्लेको भनाई छ । अघिल्लो पुस्ताले भोगेको टिभी, कालाजार, प्लेग जस्ता रोगहरुको पनि शुरुमा औषधी थिएन । विज्ञानले पछि पत्ता लगाएको हो । कोरोना भाइरस महामारीबाट जोगिने उपायहरु पत्ता लागेकोले हामीहरुले आफ्नो दैनिकीलाई बदल्न आवश्यक छ ।
‘अब विगतको जस्तो हाम्रो जिवनशैली रहँदैन । हरपल कोरोनासँग सर्तकता अपनाउनु पर्छ । सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्छ । डिजिटलाइजेशन हुनुपर्छ । सरसफाइमा उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ ।’ डा. काफ्लेको धारणा छ ।–‘जति सामाजिक दुरी कायम गरियो, जति व्यक्तिगत सतर्कता अपनाइयो, कोरोना लाग्नबाट त्यत्ति नै जोगिन सकिन्छ ।’
अस्पतालहरुमा कोभिड– १९ पोजेटिभ बढ्दा अस्पताल तुरुन्त बन्द गराउने प्रक्रियामा सरकार सक्रिय देखिएपनि, परीक्षणको दायरा बढाउन भने सरकार चुकेको चिकित्सकहरुको धारणा छ । ‘कोरोना परीक्षण बढेन भने मान्छेले आफुभित्र के छ भन्ने थाहा नपाउने भए यसले झनै समुदायमा खतरा बढ्यो ।’ डा. काफ्ले भन्छन्–‘बरु सरकार एकाध कोरोना संक्रमित देखिने वित्तिकै अस्पतालहरु नै बन्द गर्नुपर्छ भनेर लाग्यो जुन सरासर गलत हो ।’
थप ३१५ जना नयाँ संक्रमित थपिए : स्वास्थ्य मन्त्रालय
कोरोना जोखिम बढ्दै : परीक्षणको दायरा बढाउन स्वास्थ्य विज्ञ तथा चिकित्सकहरुको सुझाव